Inona koa no hatao aorian'ny fametrahana ny Ubuntu Lucid ... | Avy amin'ny Linux
Inona koa no hatao aorian'ny fametrahana ny Ubuntu Lucid ...
Ireo no zavatra nataoko rehefa vitako ny nametraka an'i Lucid tamin'ny masiniko. Nieritreritra aho fa afaka ampiasaina amin'ny maro aminareo izy ireo, ka nanapa-kevitra aho fa mahaliana ny mizara azy ireo. Ity ny fomba fametrahana Ubuntu Tweak, fanovana endritsoratra, fanovana keyboard, fanatsarana ny fanombohana, fanatsarana an'i Nautilus, hamafana an'i Mono, hametrahana dock, ary mpandefa fampiharana, misintoma ny boky torolàlana Ubuntu, sns.
1 Alefaso ny mpitantana ny vaovao farany
2 Ampidiro ny Ubuntu Tweak
4 Safidy fitendry
5 Manatsara ny fanombohana Ubuntu
6 Ampiakaro ny Nautilus
7 Fafao ny Mono ary soloy ireo fampiharana mifototra amin'izany
8 Mametraka dock sy mpandefa fampiharana
9 Tsidiho ny Ivontoerana Software Ubuntu
10 Sintomy ny Manual Manual Ubuntu.
Alefaso ny mpitantana ny vaovao farany
Na dia nametraka an'i Lucid aza ianao, noho ny majikan'ny Linux sy rindrambaiko maimaim-poana sy iaraha-miasa, dia azo inoana fa efa misy fanavaozana ny sasany amin'ireo rindranasa tianao indrindra.
Noho izany antony izany dia tsy hevitra ratsy ny mihazakazaka ny Update Manager haharitra hatrany. Azonao atao ihany koa ny manokatra terminal ary mihazakazaka:
Ampidiro ny Ubuntu Tweak
Raha mbola tsy fantatrao ny Ubuntu Tweak dia azonao antoka fa nandany ny fotoanao ianao. Ity fampiharana ity dia ahafahanao manitsy ireo zavatra "sarotra" rehetra atao ao amin'ny Ubuntu. Tsy dia sarotra izy ireo, fa ny UT kosa mahatonga azy ireo ho mora aminao.
Zavatra azonao atao amin'ny Ubuntu Tweak:
Mametraha sasany amin'ireo rindranasa tianao indrindra ary codecs sy plugins ilaina. Ankoatra ny hafa, mamporisika anao aho hametraka Gimp, plugins flash, lohahevitra ao amin'ny fiarahamonina, fanampiny voafetra (hitendry mp3s sy rakitra multimedia hafa), cairo-dock (dock tsara indrindra… tsara lavitra noho i Docky), Kupfer (ny solon'ny Gnome -Do), Chromium (ilay Google Chrome "maimaimpoana"), VLC (ilay mpilalao horonantsary malaza), Divay (hampandeha ny rindranasa Windows) ... tsara, mbola misy maro hafa. Ny tsirairay dia hametraka izay ilainy arakaraka ny filany.
Kitapo madio kokoa. Izy io dia ahafahanao manadio ny rafitrao sy mamafa ny fisie vetivety, ny cache, ny fikirana amin'ny programa, ny kernel taloha, sns
Safidy fidirana. Ubuntu 0.5.4 dia mamela anao hanova ny sary famantarana sy ny mombamomba ny efijery an-trano na ny efijery fidirana.
Fikirana Compiz sy GNOME. Ny fananganana Compiz sy GNOME dia tsy asa sarotra intsony. 🙂
Fikirakirana mpitantana varavarankely. Tsy tianao ny fametrahana ny bokotra fikandrana ao amin'ny Lucid? Eny, manomboka eto dia afaka manova azy ireo araka izay itiavanao azy ianao.
Script manager. Te hanana script foana hanovana sary marobe amin'ny mpikaroka rakitra? tsara, ny mpitantana ny script dia tonga miaraka amin'ny lisitra lava amin'ny script out-of-the-box. Mila mampihetsika azy ireo fotsiny ianao!
Amboary ny fampirimanao manokana. Manana ny horonan-tsary, sary, antontan-taratasy sns ve ianao? voatahiry amina làlana hafa fa tsy ao amin'ny TRANO-nao? Ny fametrahana tsara an'i Nautilus hahafantarana izany dia ny bullshit mampiasa UT.
Raha fintinina, ny famaritana tsirairay ny toetran'ny Ubuntu Tweak dia asa tsy misy farany. Ho fanampin'izay, programa tsotra be izy io hampiasaina. Ny fametrahana UT dia iray amin'ireo zavatra voalohany tokony hataon'ny mpampiasa Ubuntu rehetra.
Sintomy ny endritsoratra
Ny endritsoratra ampiasaina amin'ny Ubuntu dia tsy ny tsara indrindra. Mpampiasa maro no misafidy apetraka ny Droid Fonts y ny Microsoft Font. Indrindra ireo voalohany dia tena tsara, indrindra ampiasaina ho endritsoratra ho an'ny biraonao.
Mba hanaovana izany, mandehana any amin'ny biraonao, tsindrio havanana, ovay ny fiavian'ilay endritsoratra endritsoratra endritsoratra. Nisafidy ny mitovy amin'ny Droid aho isaky ny loharano ... ary voila! Indrindra raha manana kahie na netbook ianao dia ho tsikaritrao ny fivoarana tsy mampino amin'ny biraonao. Ny mpampiasa sasany dia manolotra ihany koa ny fampidinana ny haben'ny endritsoratra ampiasaina, fa miankina amin'ny tsiro tsirairay avy izany.
Manoratra amin'ny fiteny maro ve ianao ary mila manova ny fitendry matetika? Eny, mora ny mamela izany fahafaha-manao izany. Mandehana any amin'ny System, Prefers, Keyboard. Ao amin'ny zoro fizarana, tsindrio ny bokotra Add. Farany, safidio ireo klavier samihafa tianao ampiana.
Mba hahamora kokoa ny fanovana ny kitendry amin'ny fampiharana rehetra, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny Alt + Shift (izay fitambarana manan-danja ampiasaina ao amin'ny Windows), kitiho ny bokotra Safidy. Mandehana any amin'izay lazainy hoe Key hanovana ny layout ary safidio ny Alt + Shift ary esory miaraka ireo fanao roa Alt.
Manatsara ny fanombohana Ubuntu
Toy ny ao amin'ny Windows dia manampy foana ny fampandehanana ireo rindranasa izay mandeha rehefa manomboka ny Ubuntu. Ity dia azo atao ihany koa amin'ny Ubuntu Tweak, na afaka mandeha amin'ny System, Prefers, Startup Applications ianao.
Raha vantany vao tonga, dia resaka fifidianana ny programa izay tsy tianao ny mihazakazaka amin'ny fanombohana. Raha ny amiko dia nesoriko ny fizarana: Fizarana rakitra manokana, Desktop lavitra, Bluetooth Manager, feo Gnome Login, Evolution Alarm Notifier, Ubuntu One.
Sarotra be ny manome soso-kevitra izay fampiharana hanafoanana azy, miankina amin'ny filàna sy ny tsirony avy aminareo tsirairay avy, saingy nolazaiko izy ireo mba handraisanareo azy.
Ampiakaro ny Nautilus
Nautilus no mpikaroka rakitra GNOME. Izy io dia programa tena tsara fa maro ireo mpampiasa no nitaraina noho ny tsy fitsinjarana ratsy ny sasany amin'ireo singa ao aminy. Raha te hanatsara ny fisehoan'ny maso an'ny Nautilus ianao ka toa ny sary etsy ambany dia araho ny torolalana etsy ambany.
Voalohany, tsy maintsy mametraka Nautilus Elementary amin'ny trano fitahirizana izahay. Mba hanaovana izany dia manokatra terminal izahay ary manoratra:
sudo add-apt-repository ppa: am-monkeyd / nautilus-elemental-ppa sudo apt-mahazo fanavaozana sudo apt-get upgrade pkill nautilus
Ary farany, dia mitoetra hatrany ny fametrahana ny "Breadcrumbs" ka, manaraka ny ohatra tao amin'ny pikantsary teo aloha, ny làlana ankehitriny dia toa Home> Earendil> Desktop. Ny famolavolana sary natao hanehoana izany no tsy maintsy apetraka.
Manokatra terminal izahay ary, hahazoana antoka fa ao amin'ny lahatahiry (HOME) an'ny mpampiasa anay izahay dia manoratra:
Rehefa manokatra an'i Nautilus ianao dia mety tsy dia tsara loatra izany. Ny sisa ataonao dia ny mankany amin'ny Edit, Prefers, Tweaks. Rehefa tonga eo, safidio ny safidy Asehoy toy ny sombin-mofo.
Fafao ny Mono ary soloy ireo fampiharana mifototra amin'izany
Tsy fantatrao ve izay Mono? Mbola tsy hitanao ve maninona no minono? Eny, hotehiriziko ho fohy izany, manokatra varavarana amin'ny mety fitoriana Microsoft ho an'ireo rehetra mampiasa rindrambaiko Mono; Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mampiditra anao amin'ny quilombo fahazoan-dàlana avy amin'izany, azoko an-tsaina fa amin'ny naha-mpampiasa Windows taloha, te hiala ianao.
Etsy ankilany, amin'ny famafana an'i Mono dia hamonjy habaka betsaka izay iankinan'ny fiankinan-doha aminy ianao ary, raha ny tranga Ubuntu, dia eo fotsiny "hanohana" ny rindranasa 3 napetraka amin'ny alàlan'ny default: Gbrainy, F-Spot ary Tomboy. Raha tsy mampiasa ny iray amin'ireto ianao dia azonao esorina amin'ny Synaptic ary koa ny fonosana rehetra milaza Mono na CLI.
Raha hamafana an'i Mono dia azonao atao ihany koa ny manokatra ny terminal sy mitendry:
sudo apt-get esory --manorena libgdiplus mono-runtime sudo rm -rf / usr / lib / mono
Aza mikoropaka: fonosana fanampiny be dia be no hofafana. Ireo no trano famakiam-boky izay ilain'ny programa rehetra miorina amin'ny mono. Izy rehetra ireo dia tafiditra ao, araka ny efa noresahiko teo aloha, hanohanana ireo fampiharana telo ao amin'ny Lucid: GBrainy, Tomboy, ary F-Spot. Tsy dia ampiasaina firy ireo telo ireo, raha ny fiheverako ny fanetren-tena. Ho fanampin'izay, misy soloina maimaimpoana tanteraka.
Fanoloana sasany amin'ireo programa miorina amin'ny Mono
Muine, Banshee >> Amarok, Rhythmbox, Songbird, Audacious, QuodLibet, Exaile, BMP, Sonata, XMMS, sns.
Raha toa ka nahavita an'io taorian'ny fametrahana Lucid isika dia afaka mametraka ny programa fanolo ho an'ny Tomboy sy F-Spot, manokatra fantsona ary manoratra:
sudo apt-mahazo mametraka gnote gthumb
Mametraka dock sy mpandefa fampiharana
Efa nahita Mac ve ianao ary maty noho ny fialonana noho ny tsy fanananao bara farany misy sary mihetsika mampino ny fampiharana tianao indrindra? Izany no antsoina hoe a Dock ary amin'ny Linux dia misy kalitao tsara marobe. Anisan'ireo miavaka tsara indrindra Docky, Dock Kairo y Awn.
Raha ny hevitro, Docky dia manana ny olana mifototra amin'ny Mono ary Awn dia seranan-tsambo tena tsara fa mila fitadidiana be dia be. Raha toa ahy ianao ary manana solosaina finday mila fantsona haingam-pandeha sy maivana, izay tsy dia mahatadidy firy ary manao tsara ny asany koa, avy eo mametraka Kairo Dock. Ho gaga ianao.
El app launcher Iray amin'ireo zavatra tsy azo adino koa io. Fampiharana kely izy io izay rehefa manindry fitambarana fanalahidy hafahafa, raha ny ahy dia hita ny Super + Spacebar. Ny sisa dia ny manoratra ny anaran'ny fisie, fampiharana, tianao sns. Te hanokatra sy hanery hiditra izahay. Eny, mora izany. Azonao atao koa ny manamboatra azy io hilalao kapila manokana amin'ny Rhythmbox na ny rindran-kira tianao indrindra, hampandeha baiko ao amin'ny terminal, hikarakarana varavarankely misokatra sns, sns, sns. Ny mpandefa fampiharana tsara indrindra azo alaina ho an'ny Linux dia ny Gnome Do sy Kupfer. Gnome-Do, araka ny efa nolazaiko teo, dia mifototra amin'ny Mono; ny safidy tsara indrindra dia mametraka Kupfer. Izy io dia miasa toy ny hatsarana ho ahy!
Aza adino: raha mikasa ny hametraka Docky na Gnome-Do ianao, ireo fampiharana amin'ny lamaody anio, andramo aloha Dock Kairo y varahina. Amin'ny fipihana ny rohy dia hapetraka ireo programa etsy ambony. Aza adino ny manampy roa amin'ny lisitry ny rindranasa izay manomboka amin'ny fanombohana. Ho an'izany, mandehana any amin'ny System, Prefers, Startup Applications ary ampio cairo-dock sy kupfer ho baiko. Amin'ny anarana sy ny filazalazana ny tsirairay ... tsara, napetrakao fotsiny.
Ary lazain'izy ireo fa sarotra indray ny Linux! TPT…
Tsidiho ny Ivontoerana Software Ubuntu
Ny Ubuntu Software Center dia zavatra tsy ho hitanao amin'ny distro Linux hafa. Izany no antony mahamety ny mitsidika azy. Ho fanampin'izay, voarindra tsara izy io ary mora ny mahita fampiharana mahaliana.
Raha te hampandeha izany dia mandehana any amin'ny Applications, Ubuntu Software Center.
Sintomy ny Manual Manual Ubuntu.
Ny torolàlana Ubuntu dia torolàlana feno famaritana feno sy mora azo, indrindra ho an'ireo vao manomboka milentika amin'ny tontolon'ny Linux.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny boky torolalana, mamporisika anao aho hamaky Ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Inona koa no hatao aorian'ny fametrahana ny Ubuntu Lucid ...
malaso dia hoy izy:
Salama, ahoana no tiako ny hevitrao ary nohazavaiko tsara ny antony maimbo ny gidro, ampiako ao koa ny maimbo mocosoft hahaha
Manana olana hafahafa ihany aho, miaraka amin'ny nautilus dia tonga lafatra ny zava-drehetra ... fa ny zana-tsipìka amin'ny farany tsy hita, izany hoe, raha mijery ny pikantsary napetrakao amin'ireo zana-tsipìka ianao dia ho hitanao eo indrindra manomboka misy efamira kely misy tendron'ny zana-tsipìka amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny adiresy satria amin'ny faran'ny làlana izay misy zana-tsipìka dia tokony hiseho iray toy ny amin'ny voalohany fa tsy hita izany
ary ny fahitana fa ao amin'ny fofinho dia misy folder .nautilus (ity foana) ary fampirimana hafa noforonina rehefa nakarina ireo sary, ny iray manana ny anarana .tema dia noforonina, hisy fiantraikany ve? Inona no mety ho vahaolana satria teto ihany no nahitako an'io
Mamaly an'i fofo
Tsia, tsia ... io indrindra no olana noresahiko tamin'ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra:
Heveriko fa efa namboarina toy izany. Raha sanatria ka tsy raikitra io dia nosokafako ny terminal nametraka ploill nautilus ary nanokatra an'i Nautilus indray.
Tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo fidirana feno sy tsara indrindra hitako tamin'ity lohahevitra ity! Be !!!
Nanoratra azy ireo ianao tamin'ny fampiasana ny marika marina, lehibe kokoa noho ny. Banshee dia in-jatony mahery mihoatra ny Rhythmbox, Docky mankany AWN ary Tomboy mankany Gnote. Na izany aza, raha miahiahy bebe kokoa ianao fa ny masininao dia ny fomba itiavan'i Richard Stallman azy hiasa tsara ho anao, tohizo ary ataovy azo ampiharina na tsy misy ilana azy.
Mamaly an'i Vraiment
Ny fomba fametrahana ireo rindranasa tianao indrindra amin'ny milina maro dia mora be
Ubuntu Tweak 0.54 misy